Cilmibaaraha adeegsada maantus baarineedka, waxaan ku matali lahaa sida qof saaran buur dheer dusheeda, kaddibna hoos u soo daadagaya. Macnahoodu waxaa ka helaysaa liiska ereyada. Labka Soomaalidu waxay ku magacaabaan gaban; dheddigana dhoocil. Sidoo kale waxa uu ahaa aabihii dhaqaalaha sida aan hore u soo tibaaxnay. Cilmibaare walba oo doonaya in uu qaado waddada maantus baarineedka waa ku waajib in uu tixgeliyo qodobada hoose:. Dhanka kale, barashada aqoonta waa maaddo ka mida felsafadda, taas oo ku dulwareegata aragtiyada la xiriira aqoonta.
Adeegsiga hababka cilmiga ku dhisan ayey laamahani kaga duwanaadeen kuwa kale ee ku saabsan dadka. La mid maaha cilmiga loo yaqaan social science ee aan hore uga soo faalloonnay; hase ahaatee, waa mid madax bannaan. Inbadan oo ah dadka cilmigan bartaa kuna xeel dheeraadaa way ku fashilmeen in dhab ahaantii ay sidii la rabay u qeexaan amaba ay u soo bandhigaan, waxa se ay ku soo ururiyaan: waa barashada bulshada, yadoo loo dhabbe galayo is-dhexgalka bulshada iyo hannaanka ay bulsho gaar ahi u noolaato oo la barto.
Sida aan ka soo gaadhnay odayga gadh-caddaaga ah, Soomaalidu waxay tilmaamaan in kolka hore uu caruur yahay, kadibna darandar, ka dib na dhallaan. Labka Soomaalidu waxay ku magacaabaan gaban; dheddigana dhoocil.
Waxa xiga kuray iyo foodlay oo dumarka lagu tiraabo. Intaas ka dib inanku waa barbaar halka gabadhana gashaanti loogu yeedho. Marka xiga waa garmaweyn, marka xiga waa oday ama habar, marka xiga waa coomir xaaddu caddaatay, intaas ka dib labaduba waxay u iishaan xagga geerida waxaana ay Rabbi ku bilaabmaan baryo si dharaarihii hore wixii ay gaf galeen Alle uga dhaafo.
Magaca Ibnu Khaldun waa mid bari iyo bogax ba ka dhacay. Ragga cilmigan darsaa hal mid oo Soomaalida faaido weyn u leh aan uga soo min guurinno. In badan waxa canaan lala fuulaa ruuxii gaf ku kaca, waxa lagu tilmaamaa mid maan-gaab ah, waxa lagu sagootiyaa magac xun, waxaana laga qaadaa maamuuskii iyo milgihii uu bulshada ku dhex lahaa. Haddaba, aqoonyahannada cilmigan darsaa waxay sheegaan in bulshada la ixtiraamo oo aan lagu celcelin waxa xun. Tusaale ahaan, haddii uu macalinku ama waalidku ilmaha yar ku celceliyaan saaqid ayaad tahay, waxa uu kolka danbe dhab u noqonayaa saaqid, haddii la yidhaahdo tuug baad tahay, kolka danbe falkii ayaa uu ku kacayaa.
Adeegsiga hababka cilmiga ku dhisan ayey laamahaani kaga duwanaadeen kuwa kale ee ku saabsan dadka. La mid maaha cilmiga loo yaqaan social science ee aan hore uga soo faalloonnay; hase ahaatee, waa mid madax bannaan. Inbadan oo ah dadka cilmigan bartaa kuna xeel dheeraadaa way ku fashilmeen in dhab ahaantii ay siddii la rabay u qeexaan amaba ay u soo bandhigaan, waxa se ay ku soo ururiyaan: waa barashada bulshada, yadoo loo dhabbe galayo is-dhexgalka bulshada iyo hannaanka ay bulsho gaar ahi u noolaato oo la barto. Sida lagu male weyn yahay, Ibnu Khaldun waa aabihii cilmigan loo yaqaan sociology. Sidoo kale waxa uu ahaa aabihii dhaqaalaha sida aan hore u soo tibaaxnay. Haddaba, Ibnu Khaldun oo dhintay muddo hore oo noolaa qarnigii 14aad ee Miilaadiga.
Somaliland Primary Syllabus
Adeegsiga hababka cilmiga ku dhisan ayey laamahani kaga duwanaadeen kuwa kale ee ku saabsan dadka. La mid maaha cilmiga loo yaqaan social science ee aan hore uga soo faalloonnay; hase ahaatee, waa mid madax bannaan. Inbadan oo ah dadka cilmigan bartaa kuna xeel dheeraadaa way ku fashilmeen in dhab ahaantii ay sidii la rabay u qeexaan amaba ay u soo bandhigaan, waxa se ay ku soo ururiyaan: waa barashada bulshada, yadoo loo dhabbe galayo is-dhexgalka bulshada iyo hannaanka ay bulsho gaar ahi u noolaato oo la barto. Sida lagu male weyn yahay, Ibnu Khaldun waa aabihii cilmigan loo yaqaan sociology. Sidoo kale waxa uu ahaa aabihii dhaqaalaha sida aan hore u soo tibaaxnay. Haddaba, Ibnu Khaldun oo dhintay muddo hore oo noolaa qarnigii 14aad ee Miilaadiga.